6/03/2014 11:03:00 AM
အမတ်တစ်ယောက်ဟာ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေအဖြစ် သူ့ဇနီးနဲ့အတူ ကမ်းခြေဟိုတယ်မှာ
အနားယူနေပါတယ်။ ညနေခင်းရောက်တော့ ဟိုတယ်ရဲ့ ၁၁ ထပ် သူ့အခန်းကနေ
ဧည့်ကြိုကောင်တာဆီကို အလျင်စလိုဖုန်းခေါ် နေပါတယ်။
”ဒီမှာ ကျုပ်မိန်းမနဲ့ ကျုပ်စကားများနေလို့ ဒီလို မြန်မြန်လာပေးပါ။
ဟိုတယ်ပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ဆင်းချမယ် လို့လည်း ပြောနေတယ်”
”ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စမှာ
မပါချင်ဘူးခင်ဗျာ။ ဟိုတယ်နဲ့ ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ
အဲဒီအခါ စိတ်ဆိုးတကြီးနဲ့ အမတ်မင်းက ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။
”သောက်ကျိုးနဲ၊ ဒါ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စ။ ဟုတ်လား။ ဒီမှာ
သောက်ရေးမပါတဲ့ ပြတင်းပေါက်က မပွင့်ဘူးကွ။ အဲဒါ ဟိုတယ်က
မြန်မြန်လာလုပ်ပေးရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလားကွ ဟေ ”
6/03/2014 10:44:00 AM health-news
6/03/2014 10:44:00 AM knowledge
၁. အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့သန့်ရှင်းသော မိန်းမ
၂. မိဘအား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီးများအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ်များအား အရာရာနားလည်ထိန်းကျောင်းပေးတတ်သော မိန်းမ
၃. ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်းဆို စိတ်မ၀င်စားတတ်.. ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ
အိမ်ထောင်ပြုခြင်း လက်ထပ်ခြင်းအမှုကို စဉ်းစားဖြစ်သော မိန်းမ
၄. အရာရာကို လွယ်လွယ်မယုံ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်သော မိန်းမ
ထိုအသိဥာဏ်အတွေ့အကြုံ လောကအမြင်များကိုလဲ သားသမီးများအား
သွန်သင် လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော မိန်းမ
၅. ဟိုးအောက်ဆုံးအဆင့်ကနေ ..ဟိုးအမြင့်ဆုံးအထိ ..ယောကျာ်းဖြစ်သူရဲ့
အလုပ်အကိုင် အဆင့်အတန်း ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ဝါနဲ့ အညီ လိုက်လျောညီစွာ
နေထိုင် ပြုမူတတ်ပြီး .. ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက် ပေါင်းသင်းမည့် မိန်းမ
၆. မာန်မာန မတက်.. ကြွားဝါးလိုခြင်း အလျဉ်းမရှိ.. ရိုးသားဖြူစင်စွာ နေတတ်သော မိန်းမ
၇. အချက်အပြုတ် အိမ်သန့်ရှင်းရေး .. မိသားစု ငွေကြေးကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု
သားသမီးများအား ကြင်နာယူစွာ အုပ်ထိန်းနိုင်မှု .. စသဖြင့် အခြေခံ မယားဝတ်တရားများအား
ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်သော မိန်းမ
၈. ဘုရား တရား သံဃာ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသော မိန်းမ
၉. အကျိုးမရှိသော စိတ်ပျော်ရွှင်မှုသက်သက် .. အိမ်အလည်အပတ်များခြင်း
အင်တာနက်တွင် အလေလိုက်ခြင်း .. အချစ်ဝထုတွေ ဖတ်ခြင်း ..ရုပ်ရှင်ကားတွေ
ထိုင်ကြည့်ခြင်း… စသည်တို့တွင် လိုတာထက်ပိုရု စိတ်ပါဝင်စားမှု မရှိသော မိန်းမ
၁၀. ကိုယ်တစ်ဦးတည်းသာ အရမ်းချစ်သော မိန်းမ
6/03/2014 10:39:00 AM world-news
6/03/2014 10:39:00 AM religion
သူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်ချင်ရင် သူတော်တာ၊ မတော်တာ
ကြည့်ဖို့မလိုဘူး၊ ကိုယ်ကောင်း၊ မကောင်းကိုပဲ ကြည့်ဖို့
လိုတယ်၊ တကယ့်သူတော်ကောင်းဆိုတာ ကိုယ်ကောင်း
ဖို့က အဓိကကျတယ်၊ သူတော်မှ ကိုယ်ကောင်းမယ်
ဆိုရင်တော့ သူတော်ကောင်းစစ်စစ် မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။
`သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုမဆိုးပါ´ ဆိုတဲ့ စာတမ်းကလေးဟာ
တစ်ချိန်က တော်တော်ခေတ်စားခဲ့တယ်၊ ဟိုအိမ် ဒီအိမ်
ဟိုဆိုင် ဒီဆိုင် နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ချိတ်ထား၊ ကပ်ထားတာ
တွေ့ရဖူးတယ်။ သဘောကျလို့ ကိုယ့်အယူအဆ ကိုယ့်
သဘောထားနဲ့ တိုင်ဆိုင်လို့ အမြတ်တနိုးကပ်ထားကြတာ
ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါ ကိုယ့်စိတ်ကို ထုတ်ပြနေတာပဲ၊
ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြနေတာပဲ၊ ဒီအဆိုအမိန့်ဟာ
မှန်သလိုလိုရှိပေမယ့် တကယ်တော့ သိပ်မမှန်သေးဘူး။
သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါဆိုတော့ သင်မကောင်းလျှင်
ကျွန်ုပ်ဆိုးမယ်ပေါ့၊ မင်းကောင်းရင် ငါကောင်းမယ်၊
မင်းဆိုးရင် ငါဆိုးမယ်၊ မင်းက ပါးရိုက်ရင် ငါက နားကိုက်မယ်၊
အိုးရွဲ့ရင် စလောင်းရွဲ့မယ်၊ ဒီ အဓိပ္ပါယ်ပဲ။ ဒါဟာ တကယ့်
သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ သဘောထားမဟုတ်ဘူး၊ သာမန်အဆင့်က
ကိုယ့်ပါးရိုက်တာ၊ ကိုယ့်လက်သီးနဲ့ထိုးတာ ဒီအတိုင်းပဲ ခေါင်းငုံ့
ခံနေရမှာလားဆိုတော့ အဲဒီအဆင့် အဲဒီသဘောထားမျိုး
ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ လောကထဲမှာ တစ်ခါတစ်ခါ ဆွေဂုဏ်မျိုးဂုဏ်
ဓနဂုဏ်အပြင် မိုက်ဂုဏ် ဆိုတာမျိုးလည်း လိုအပ်တဲ့အခါ ရှိ
သေးတာပဲ၊ နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက်ထောင်ပြရတယ်
အခုဟာ ယေဘုယျကိစ္စ အဝဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကောင်းအဆိုးကို
ပြောနေတာ၊ ဘယ်သူကောင်းတယ်၊ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်၊
ဘယ်သူဆိုးတယ်၊ ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်၊ အချင်းချင်းတော့
သိကြတာပဲ၊ `သူဆိုးတာ သူ့အပိုင်း၊ သူမကောင်းတာ သူ့အပိုင်း၊
ကိုယ့်အပိုင်းက ကိုယ်ကောင်းနေဖို့ အရေးကြီးတယ်။´
မကောင်းမှန်းသိရင် မဆက်ဆံနဲ့၊ မပေါင်းသင်းနဲ့၊ ဝေးဝေးရှောင်၊
`တကယ်တော့ ကိုယ်ကောင်းတာ ကိုယ့်အတွက်ပါ၊ ကိုယ်ကောင်းတာ
သူ့အတွက် မသေချာပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်ကတော့ သေချာတယ်။´
`ဘုရားအလောင်း မျောက်မင်းဟာ သူ့ခေါင်း ထုရိုက်သတ်တဲ့ မုဆိုး
တောထဲမှာ မျက်စိလည် ဒုက္ခရောက်နေတာကို သစ်တစ်ပင်က
တစ်ပင်ကူး၊ သူ့ခေါင်းကသွေးစက်နဲ့ လမ်းပြတော်မူခဲ့တယ်၊
ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းတဲ့ သူတော်ကောင်းလဲ၊ ဒီလောက်
သေချာတွေးကြည့်ရင် ကြက်သီးမွှေးညှင်း ထလောက်အောင်၊ မျက်ရည်
ကျလောက်အောင် ကြည်ညိုရပါတယ်၊ ငါ့တို့ရဲ့ ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ
ဘုရားတပည့် ငါတို့တတွေကော ဘယ်လောက်ကောင်းကြသလဲ၊
ဘယ်လောက် ကောင်းနိုင်သလဲ၊ ဘာတွေကောင်းကြသလဲ၊ ဘယ်သူ့
အပေါ် ဘယ်လောက်ကောင်းကြသလဲ၊ ဘာတွေကောင်းထားသလဲ၊
ဘာတစ်ခုမှ မျှော်လင့်ချက် မထားဘဲ ငါကောင်းထားတာ၊ ငါကောင်း
ခဲ့တာ ဘာတွေများ ရှိသလဲ၊ ငါ သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီလား၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်။ ။
[ ဆရာတော် အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ ]
Dhamma Dãna Source ► ဓမ္မဒါန ကိုလှိုင်တိုး
6/03/2014 10:37:00 AM thai-news
6/03/2014 10:36:00 AM articles